အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်၏ ယခင် ၂၀၁၄နှင့် ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာဆွေးနွေးပွဲနှစ်ခုတွင် အတိုးနှုန်းတင်ခဲ့ဖူးသော်လည်း ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် အတိုးနှုန်းတင်မည့်အကြောင်း ခိုင်ခိုင်မာမာပြောဆိုမည့်ပုံမတွေ့ရနိုင်ဟု ဈေးကွက်က ခန့်မှန်းထားကြတာဖြစ်ပါသည်.
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်သည် ၂၀၁၇ ဇွန်လတွင် အတိုးနှုန်းအပြောင်းအလဲ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်. ထိုစဉ်က အတိုးနှုန်းကို ၁. ၂၅%အထိ တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်. ယခုဒီဇင်ဘာ အတိုးနှုန်းတင်နိုင်ခြေမှာ ၉၀%အထိရှိနေပါသည်.
၂၁:၀၀ MT အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်မည့် အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်ပြန်ပြီးပါက ၂၁:၃၀ MT အချိန်တွင် ဗဟိုဘဏ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်.ထိုပွဲနှစ်ခုလုံးသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးနှင့် အခြားငွေကြေးအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုပြင်းပါသည်. အထူးသဖြင့် EUR/USD နှင့် USD/JPYအတွဲများတွင် ပိုမိုအလှုပ်အခတ်များနိုင်ပါသည်.